ဆောက်လုပ်ရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင် တည်ဆောက်နေသော ဤကဲ့သို့ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများတွင် ဝန်ချီစက်များသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုသည်မှာ အဆောက်အဦး သို့မဟုတ် အခြေခံအဆောက်အအုံ တစ်ခုကို တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကွဲပြားခြားနားသည့် အချက်မှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင် ဝယ်ယူမည့်သူ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိသော်လည်း ပုံစံတူ ပစ္စည်း အမြောက်အမြားကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လုပ်ကြပြီး ဆောက်လုပ်ရေး မှာမူ ရှိပြီးသား ဖောက်သည် အတွက် နေရာတစ်ခုပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများသည် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏ ခြောက်ရာခိုင်နှုန်းမှ ကိုးရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှိတတ်ကြသည်။ 
ဆောက်လုပ်ရေးသည် အစီအစဉ် ရေးဆွဲသည့် အဆင့်မှ စတင်ပြီး ပုံစံထုတ်ခြင်း၊ ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ခြင်း အဆင့်များမှ တဆင့် စီမံကိန်းပြီးဆုံးပြီး ဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြုရန် အဆင်သင့် ဖြစ်သည် အထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။
ကြီးမားသော ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် နယ်ပယ်ကဏ္ဍ အသီးသီးမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ လိုအပ်သည်။ ဗိသုကာမှ လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲပြီး ဆောက်လုပ်ရေး မန်နေဂျာ၊ ပုံစံထုတ် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းမန်နေဂျာတို့မှ ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်လေ့ ရှိသည်။ စီမံကိန်းကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် ထိရောက်သော အစီအစဉ် ရေးဆွဲမှုသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပုံစံထုတ်ရာနှင့် ဆောက်လုပ်ရာတွင် ဇုံသတ်မှတ်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မှု၊ အချိန်ဇယား အောင်မြင်စွာ သတ်မှတ်နိုင်ရေး၊ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်း စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြောင့် အများပြည်သူတို့ အတွက် အဆင်မပြေ ဖြစ်မှုများ နှင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများ စသည်တို့ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရသည်။ အလွန်ကြီးမားသော ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများကို မက်ဂါစီမံကိန်းများဟု ခေါ်ကြသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Compare: "Construction"၊ Merriam-Webster.com၊ Merriam-Webster၊ 2016-02-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး၊ [...] the act or process of building something (such asahouse or road) [...].
↑ Halpin၊ Daniel W.; Senior၊ Bolivar A. (2010)၊ Construction Management (4 ed.)၊ Hoboken, NJ: John Wiley & Sons၊ p. 9၊ ISBN 9780470447239၊ May 16, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Chitkara၊ K. K. (1998)၊ Construction Project Management၊ New Delhi: Tata McGraw-Hill Education၊ p. 4၊ ISBN 9780074620625၊ May 16, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆောက်လုပ်ရေး&oldid=719035" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။